トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ Si loo go'aamiyo inuu model inay ku guuleystaan ??ka status hawlgalka mashiinka pachinko ah
Heemaalka caan pachinko, waxaa jira model lahayn. Waa wax iska cad, laakiin waxa macaamiil badan oo ay u fadhiyaan model Popular ah. Sidaas, sida ugu dhakhsaha badan dareemi galay dukaanka pachinko ah, waxaan u malaynayaa in ay tahay dabcan model ah macaamiisha leedahay wax badan oo ku fadhiya. Iibso xaaladda oo dhan hawlgalka, laakiin way kala duwan yihiin oo ay ku heshay iyo aragti ah ee dukaanka oo dhan, waxa ay sheegtay in wax la mid ah oo ku saabsan xaaladaha hawlgalka model-gaarka ah ee dukaamada. Isagoo ka hadlayay of
xad macaamiisha dhegi lagu daydo si fiican, laakiin waa Xintai, Xintai waa ay jiraan waxyaabo badan oo la sameeyey ee xilliga dib u soo kabashada.
Xintai waa, sababtoo ah waa wax iska cad waxaa jira orodka si fiican loo jecel yahay, ee ay duufsadeen hawlgalka Xintai, waxaan u maleynayaa in laga yaabo in ay ka soo, fadlan ogow in mararka qaarkood is gubay markii fadhigii lahaa. sidoo kale
, oo dibadda lagu daydo boor hab xasillan, sida in la sooro macaamiisha ku celiyaan ama soo kabsaday, waxaan inta badan tii pachinko in ay ka shaqeeyaan.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa sidoo kale waa martida pachinko aadan yar inay la soo wareegto lagu daydo leeyihiin. Isagoo ka hadlayay waxa ka dhacaya waa sababta xaaladda noocan oo kale ah, sababta oo ah heerka soo kabashada ee model boor uu aad u sarreeyo. hawlgalka qowladda Pachinko of model Ma wanaagsana in ku filan si ay u maleynayaa in lagu daydo boor, waxaan heerka inta badan soo kabashada ee dukaanka oo dhan sidoo kale waa heer sare ah.
Sidaas, marka hore soo galay dukaanka, si ay u arkaan hawlgalka ka mid ah tusaalayaasha boor, xaqiiqada waa, sida in aad u muhiim ah. Intaa waxaa dheer, waxaa jira kiiska halkaas oo ay jiraan baxsad ah oo ku saabsan qaabka, sida waxaa jiray caan Xintai oo hore ka mid ah dhowr toddobaad ka hor. In kiiska noocan oo kale ah, ama ay ahayd in ay dhacdo model ah, laakiin magaabo-Xintai iyo magaca aqoonsi in ay halkaas ku dhacay, magaca ay dhacdo, sida qalliinka oo ka mid ah halkaas, waayo, nooca dayactirka hawlgalka in ay mar dambe hadda kasban, in qaar ka mid ah ciddiyaha ilaa xad waxaa laga yaabaa inaad ka bedelaan. Haddii ay jirto baxsad ah oo ku saabsan qaabka, sida lagu soo barbaariyey in caga
, waxaa laga yaabaa in qiimihiisu u fadhiisan. Kaxaynta status of daydo
, la sheegay in laga yaabo in ay ansax noqon in la raadiyo daydo in ujeedadoodu tahay, si kastaba ha ahaatee, in kiisaska qaar ka mid ah iska cad haddii ay jiraan waxaa socda sidii Xintai oo cagsi ah, iyada oo loo marayo qowladda pachinko Good hawlgalka ka caadiga ah ama la mid ah, waxaa laga yaabaa in aysan haysan sida dhacdooyin gaar ah, iwm, model aad rabto in aad waxa ku dhacay haddii adiga ama ahaa Mitsurudai, in ay soo carfaan, by ciyaaro nadaam kale, ee dukaanka caadi ah kaas oo inay haleelaan xaaladda qalliinka, waxaad u baahan doontaa Sankounisuru.
maxaa yeelay, sidoo kale waxaa jira waxyaabo badan si aan loo odhan karaa in uu jiro oo caan ah, sababtoo ah shuruud la'aan jiro qalliin, waxaan u maleynayaa in khatar ma aha in ay go'aan ka Ujeedada ee baxsad kaliya.
sixitaanka ciddiyaha iyo caddaymaha, sidii laga arki jiray xogta, iyo xaglo kala duwan sida, ama sababtoo ah waxay runtii saaray orodka waa wanaagsan yahay, oo kaliya ama dukaan hawlgalka oo dhan in a filanka sare oo keliya ay sabab u wanaagsan, waa aqoonsado ilaa xad.
in daawashada caadiga ah iyo sidoo kale dukaamada xaaladda qalliinka, iwm, isku day in aad isticmaasho wax ku ool ah macluumaad sidoo kale waa xaaladda qalliinka ee model ah. Macaamiisha dhaqdhaqaaqa, sidoo kale jiri doona xasaasi u ah dukaanka of aadanaha. By falanqeeyo hawlgalka model ah, waxa ay leedahay kiis ayaa sidoo kale inuu yimaado muujiyaan sida dukaamada dheeraad ah oo caado.